faahfaahin: qaraxyo dad ku dhinteen kuwa kalena ku dhawacmeen oo muqdisho ka dhacay (Sawiro) – Radio Daljir
Noofember 9, 2018 3:51 g 0
Warar dheeraad ah ayaa waxa ay kasoo baxayaan Qaraxyo goor dhow ka dhacay Magaalada Muqdisho gaar ahaan lambar 4 Sidda ay Risaala u xaqiijiyeen Saraakiil ka tirsan Ciidamada Ammaanka.
ilaa 3 Qarax oo loo adeegsaday gawaari ayaa ka dhacay wadada u dhaxeysa Hoteel Saxafi iyo Xarunta CID-da ee Magaalada Muqdisho, waxaana xusid mudan in wadadaasi ay tahay mid mashquul ah oo ay Isticmaalaan dadweynaha xilligaan oo kale.
kan koowaad ayaa lagu ku dhuftay Hotel Saxafi oo hore loo weeraray.
dhinaca kale Qaraxyadda ka dib rag hubeysan oo tiradooda lagu qiyaasay 4 ruux ayaa isku dayay in ay galaan Hoteelka Saxafi, Waxaana toogtay Hay’addaha Ammaanka dowladda Soomaaliya.
waxaa jirra Khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac , waxaana hadda goobihii Qaraxyo ka dhaceen ku sugan Ciidamada Ammaanka dowladda Soomaaliya.
tiradda dhabta ah ee khasaaraha qaraxyaddas laamaha amaanka Muqdisho wali ma faahfaahin,balse waxaa la filayaa saraakisha amaanka inay saacadaha soo socda kawarbixiyaan qaraxyadan iyo tiradda guud ee khasaaraha dhabta ah.
Xildhibaano barlamaanka DFS ka tirsan oo ugu baqay dowlada joojinta faragalinta konfur galbeed